Disposable Ihu Nkpuchi Factory | China Disposable Face nkpuchi Manufacturers, Suppliers
Otutu agba 3 Layer ịwa ahụ nkpuchi
Igwe nkpuchi ịwa ahụ na ịwa ahụ ihu ASTM Ọkwa 3 usoro nkpuchi na-enye ihe mgbochi anụ ahụ 3 iji kpuchido onye nwe ya site na mmiri mmiri, mmetọ, pollen, ájá, na ihe ndị ọzọ ikuku ikuku na-anwale na 98 pasent BFE. A na-arụkwa ihe nkpuchi ndị na-acha uhie uhie site na akpụkpọ anụ na-enweghị akwa na akwa na loops dị egwu maka ọtụtụ awa na-eyi nke ọma.
Posmụaka Disposable Na-eche ihu Masks School kwa ụbọchị
Kidsmụaka a nwere nkpuchi ihu na waya imi na Igwe Mbipụta ejiri 100% adịchaghị mma. Yabụ, ha dị nro n'ihu ma na-enyere aka ichebe onye nwe ha. Ha na-enyekwa ụmụaka ihe pụrụ iche na ejiji, gụnyere ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ. Na 3 n'ígwé nke filtration ákwà ihe onwunwe na-enye ukwuu oru oma nchedo.
Hot Sale oge gboo 3-oyi akwa ịwa ahụ Face nkpuchi
Ihe mkpuchi ịwa ahụ ndị a nwere ike iwepu bụ 4 Layer nke Polypropylene Ultrasonically Welded together: 3 Spunbond Polypropylene Layer N'èzí, 1 Meltblown Polypropylene Filter Layer Inside. Ma ighikota Ntị ntị dị n'ihu nke ntị - ma ọ bụ - Tie otu eriri na Ntị ntị ka ọ dị mkpụmkpụ. Ndị a ịwa ahụ ihu nkpuchi ihu ahụike bụ ndị na-awa ahụ maka ịwa ahụ maka nchekwa ihe mgbochi mmiri ma nye: arụmọrụ Filtration Bacterial (BFE): 99 +%.
Audit Nchekwa 3 Layer Disposable Chebe Ihu Masks
3 Layer Face Mask bụ nke 3 oyi akwa nke akwa na-enweghị akwa; o nwere ike nzacha ike ma ọ bụ ihe ọkụ na ume. Nkpuchi Nchedo Na-agbanwe agbanwe Earloop, mmechi ntị dị nro na-ewepụ nrụgide na ntị. A na-eji anụ ahụ dị nro mee ka akwa ahụ dị n'ime, ọ bụghị ihe eji esiji, na-eme ka anụ ahụ dị nro.